pink diamond, pụrụ iche Pink
pụrụ iche Pink
The kasị ibu n'ụwa Fancy doro anya pink ube ekara diamond bụla kwetara na okushon na Sotheby si na Geneva, ndị Unique Pink nke rere for $ 31.6 nde.
All gemstones na acha diamonds nwere ike hụrụ na gba ọtọ anya iji nlele ha na agba, dị ka ndị mbụ visual echiche bụ ihe dị mkpa. Ewere na agba nkọwa site na akwụkwọ naanị naanị na-enye gị akụkụ nke ahụ.
Pink diamonds nwere ike ndị ahụ ruru a dịgasị iche iche nke hues, si purplish ka orangey ka dika uhie, na nke a diamond nwere ihe magburu onwe energetic pink na yiri iji gosipụta a nta tinge nke red,-eme ka ọ n'ezie pụrụ iche. N'adịghị ka ndị ọzọ acha diamonds ebe hue e mere site intrusion nke ọzọ atọm dị ka nitrogen ma ọ bụ boron, na pink diamonds agba emee n'ihi distortion ma ọ bụ nchegbu na crystal Ọdịdị mgbe e hiwere ya ọtụtụ nde afọ gara aga.
The Unique Pink 15.38 carat diamond ha belatara Cora International, a ụlọ ọrụ ụwa niile mara maka amị obere diamonds nke nnukwu nha na vivid fancy agba. The ọrụ nke ịcha na polishing a ike ike crystal gaara malitere na ọtụtụ ọnwa nke-ekpebi otú iji nweta agba ka ya kacha ike, na e nwere nanị a nnọọ ole na ole egbutusị n'ime ụwa, ndị nwere ike ibū ịma aka a.
E nwere ihe mmewere nke ihe ize ndụ na-agbawa ọ bụla diamond, na ịcha a acha nkume bụ ọbụna karị ka unu na-achọ ime ka ndị na agba dị ka ike dị ka o kwere site na o na-radiate si n'etiti nkume. Mgbe ịcha ọcha diamonds, ndị na-abụghị tactic a chọrọ iji mee ka ha anya colorless. O siri ike iji nlele-emesịa agba nke a pink diamond mgbe a na-ebipụ na wheel dị ka ha nwere ike ikpo elu ruo nwa oge-eme ka ha gbanwee agba, otú ahụ cutter agaghị ahụ ezi pụta ruo mgbe diamond ka dajụrụ.
The Gemological Institute of America akara ule fọrọ nke nta niile nke ụwa kasị mkpa diamonds na n'aka ndi nile diamonds osụk aka laabu kwa afọ dịghị ihe karịrị atọ pasent-nkewa dị ka acha diamonds. -Erughị ise pasent nke ndị acha diamonds bụ predominantly pink. Nkume a na-nkewa dị ka a Ụdị IIa nke kasị na ya dị ọcha ụdị diamond dabere na enweghị nitrogen. Naanị abụọ pasent nke niile diamonds mined ngosi nke a ahụkebe nghọta.
E wezụga ọhụrụ nwe ịzụ otu n'ime òkìkè rarest bara nnukwu uru ọ ga-enwe ike ịnyegharị nkume, dị nnọọ gbakwunye na ya iche.